Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Honolulu iya eSydney: Indlela entsha yokubhabha iinqwelo moya zaseHawaii
Airlines • Cofa apha ukuba le ngxelo yakho!
Iinqwelomoya zaseHawaii 'Airbus A330
I-Hawaiian Airlines namhlanje iqinisekisile ukuba iya kuqalisa kwakhona inkonzo yayo kahlanu-ngeveki phakathi kweSikhululo seenqwelomoya sase-Sydney Kingsford Smith (SYD) kunye ne-Honolulu's Daniel K. Inouye Airport International (HNL), ukuqala ngo-Dec. 13. Hawaiian, eyamisa indlela ngoMatshi 2020 ngenxa Izithintelo zokuhamba ezibekwe ekuqaleni kobhubhane, ziya kwamkela abantu base-Australia ukuba babuyele eziqithini kunye notyikityo lwabo lokubuka iindwendwe lwaseHawaii ngexesha leeholide.
“Sichulumancile ukuphinda siqhagamshele i-Hawaiʻi kunye ne-Australia kwaye sikhuthazwe yimpendulo yoluntu kwinkqubo yogonyo yesizwe yase-Australia, eyenza ukuba kuvulwe kwakhona imida,” utshilo u-Andrew Stanbury, umlawuli wengingqi yase-Australia naseNew Zealand kwi-Hawaiian Airlines.
“IHawaiʻi yindawo ethandwa kakhulu kwiholide yabantu baseOstreliya, kwaye siyazi ukuba abantu abaninzi bebelindele ukuthatha iholide yaseHawaii. Sijonge ekwamkeleni ngokukhuselekileyo iindwendwe zethu ukuba zibuyile ukuze zikonwabele ububele bokwenyani esaziyo ukuba iindwendwe zethu ziyaluthanda kwaye ziphosile, ”wongeze watsho.
I-HA451 iya kuqhuba kwakhona nge-13 kaDec ngokumka kwe-HNL ngoMvulo nangoLwesithathu ukuya kutsho ngoMgqibelo ngo-11:50 am kwaye ifike eSYD malunga ne-7:45 pm ngosuku olulandelayo. Ukuqala ngo-Dec. 15, i-HA452 iya kumka i-SYD ngoLwesibini nangoLwesine ukuya ngeCawe ngo-9:40 pm nge-10:35 am yokufika ecwangcisiweyo e-HNL, ivumela iindwendwe ukuba zingene kwindawo yazo yokuhlala kwaye ziqale ukuhlola i-O'ahu, okanye ziqhagamshelane nayo nayiphi na. kwiindawo ezine zaseMalumelwaneni zaseHawaii.
I-Hawaiʻi Gov. uDavid Ige kwiveki ephelileyo wamkele iindwendwe ezibuyileyo ukuqala nge-1 kaNov. ngoku iinzame zempilo yoluntu zibe neziphumo phakathi kwawona mazinga aphantsi e-COVID e-United States. I-Airlines yaseHawaii kwinyanga ephelileyo nayo yazisa a ividiyo entsha kwinqwelomoya ukukhuthaza abatyeleli ukuba bahambele iPono (ngokuthembekileyo) ngokuzonwabisa eHawaii ngokukhuselekileyo nangokuthembekileyo.
Ukongeza kwiinqwelo-moya ezingapheliyo eziya eHawaii, abahambi base-Australia abahamba ngenqwelomoya kwiiHawaii Airlines baphinde bafumane ukufikelela kuthungelwano lwasekhaya lwaseMelika, bebavumela ukuba baqhubeke nohambo lwabo lokuya kwii-16 zase-US ezisemaphandleni- kubandakanya iindawo ezintsha eAustin, Orlando, nase I-Ontario, eCalifornia - kunye nenketho yokonwabela ukumisa kwiZiqithi zaseHawaii.
I-Hawaiian iya kuqhubeka iqhuba indlela ye-SYD-HNL enezihlalo ezingama-278, inqwelo moya ebanzi ebanzi ye-Airbus A330, ebonisa izihlalo zesikhumba ezili-18 ze-Premium Cabin lie-flat, 68 yezihlalo zayo ezidumileyo ze-Extra Comfort, kunye ne-192 Main Cabin chair.
Okwangoku, ngabemi baseOstreliya kuphela kunye nabahlali ababuyileyo ngokusisigxina kunye namalungu abo osapho asondeleyo abavunyelweyo ukuba bangene eOstreliya ngaphandle kwe uxolelo. Ngelixa iimfuno zokungena kwilizwe laseHawaiʻi zisaza kubhengezwa, abantu baseHawaii banethemba lokuba ilizwe laseHawaii liya kulungelelanisa iimfuno zalo kunye nemithetho karhulumente wase-US efuna abo bafikayo bamazwe ngamazwe babonise ubungqina bogonyo kunye novavanyo olubi lwe-COVID-19 oluthathiweyo kwiintsuku ezintathu zokunduluka. isebenza ngoNovemba 8.
Imithetho yamazwe ngamazwe iyaqhubeka nokuvela, kwaye abahambi bayakhuthazwa ukuba bahlale behlaziywa ngamatshaneli karhulumente njengoko belungiselela uhambo lwabo.
I-Hawaiian yaqala inkonzo ye-SYD-HNL ngoMeyi ka-2004 kwaye yagcina indawo yayo njengendawo ehamba phambili yokuthwala uhambo oluya eHawaiʻi ngokudlula eNew South Wales. Inkonzo yenkampani esebenza kathathu ngeveki phakathi kwe-HNL kunye neSikhululo seenqwelomoya saseBrisbane (BNE), eyasungulwa ngoNovemba 2012, isamisiwe.
utyelelo www.HawaiianAirlines.com ukujonga iishedyuli zenqwelomoya kunye nokuthenga amatikiti.